कसले राख्यो निर्मलाका बुवाको गोजीमा विषको गोली, किन दौडिन्छन् लुगा फुकालेर सडकमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
कसले राख्यो निर्मलाका बुवाको गोजीमा विषको गोली, किन दौडिन्छन् लुगा फुकालेर सडकमा ?
भीमदत्तनगर, अनसनमा बसेका निर्मला पन्तका बुवाको मानसिक अवस्था समस्याग्रस्त देखिएको छ ।
रात्रीकालिन समयमा समेत अनसन सुरु भएपछि उनले मानसिक सन्तुलन गुमाएका हुन ।
निर्मला पन्तकी आमाका अनुसार, राती अनसन बस्न थालेपछि उनी आफ्नै सुरमा बोल्ने, हिँडने गर्न थालेका छन् ।
यतिमात्रै होइन, उनी लुगा समेत फुकालेर हिँडने गरेका छन् ।
अनसनस्थलबाट निस्केर जथाभावी बोल्दै सडकमा हिँडन थालेपछि पन्तकी आमाले उनको उपचारका लागि अपील गरेकी छिन् ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । हत्यालगत्तै भारतबाट फर्केका निर्मलाका बुवाको अवस्था सामान्य नै भएपनि अनसनमा बस्न थालेपछि उनको मानसिक स्वास्थ्यमा परिवर्तन देखिएको निर्मलाकी आमाले बताईन ।
निर्मला पन्तकी आमाले कान्छी श्रीमतीसँग बिहे गरेर भीमदत्तनगरको भासीमा घर बनाएपछि पनि एकपटक यसैगरी उनको मानसिक सन्तुलनमा समस्या देखिएको थियो ।
“पहिला घर बनाउँदा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो ।” निर्मला पन्तकी आमाले भनिन, “त्यतिबेला म पनि भेटन गएकी थिएँ । तर अहिले अलि बढी नै भएको छ, वहाँको उपचारका लागि सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो ।”
दिनभरी अनसनमा बस्दा बिभिन्न व्यक्तिहरुसँग भेट हुने र राती अनसनमा बस्दा समेत सुत्न नपाइने कारणले समस्या भएको हुनसक्ने आमाको भनाई छ । त्यसैपनि गहिरो निन्द्रा नपर्ने निर्मलाका बुवा राती अनसन बस्नुपर्ने भएपछि थप मानसिक तनावमा आएको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
केही महिला अधिकारकर्मीहरुको दबाबमा राती पनि अनसन बस्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
यसैबीच निर्मला पन्तका बुवाको बारेमा डरलाग्दो तथ्य खुलासा भएको छ । अनसनस्थलमा बस्दै आएका एकजनाले दिएको जानकारी अनुसार, निर्मला पन्तका बुवाको गोजीमा विषादीकारुपमा प्रयोग गरिने सल्फास नामक औषधीको गोली भेटिएको हो ।
सल्फासलाई किरा लाग्नबाट जोगाउन गहुँलगायतका अन्न भण्डारको बेला प्रयोग गरिन्छ । यो घातक विषादी हो । चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बिना यो किन्न पाईंदैन ।
मनसिकरुपमा सन्तुलित नभएका उनले कहाँबाट सल्फास ल्याए भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन ।
“उनी आफै सल्फास किनेर ल्याउन सक्दैनन ।” श्रोतले भन्यो, “सल्फास जसले पायो त्यसले किन्न पनि सक्दैन । तर उनको गोजीमा भेटिएपछि यसले डरलाग्दो संकेत गरेको छ ।”
आखिर कसले राख्यो त गोजीमा सल्फास ? यो प्रश्न अहिले चौतर्फी उठेको छ ।
याे पनि पढ्नुस मिलेन प्रदीप र विशालको डिएनए, प्रदीपविरुद्ध अन्य प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी
सल्फास राख्ने व्यक्तिले लुकाएर चुपचाप राखिएको हुनसक्ने अनुमान श्रोतको छ । “यदि भनेर दिएको भए उनले खाइसक्थे होलान तर यो नजानिदो तरिकाले राखिएको देखिन्छ ।” श्रोतको भनाई छ ।
निर्मला पन्तको हत्या भएको तीन महिना बितिसक्दा समेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
स्थानीय प्रसासनले अनसनको विषयलाई सामान्यरुपमा लिएको र अनसनको क्रममा समेत दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गरिएको आरोप श्रोतको छ ।
भोली अनसनकै क्रममा केही भइदियो भने यसले झन ठूलो समस्या निम्त्याउनेतर्फ प्रसासन चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए ।
यसैबीच नेकपाका प्रदेश नेताहरुले निर्मलाका बुवाको उपचारका लागि पहल गर्न शीर्ष नेतृत्वसमक्ष छलफल गरेको जनाएका छन् ।